ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးသည့်မြင်ကွင်း (နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂ဝ၂ဝ)
မြန်မာနိုင်ငံ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကျင်းပခဲ့ပေမဲ့ မသမာမူတွေ၊ မမျှတမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မမေခ က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဒီလနိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ မသမာမှုတွေ၊ မမျှတမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး အနိုင်ရ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အဓိကအတိုက်အခံ USDP ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က အငြင်းပွားတာ၊ တိုင်တန်းတာတွေ ရှိနေတာပါ။
NLD ပါတီပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားစရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"မရှိဘူးဆို ၄၀၊ ၅၀ လောက်ရှိတာပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပေါ့. တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု တော့ မဟုတ်ဘူး။ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကတော့ ဒီထက်နည်းမှာပါ။ ကျနော်တို့တွေ့သလောက်ကတော့ ကျနော်တို့တိုင်တာက ၂၀၁၅ထက် တော့ပိုများလာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ "
မန္တလေးတိုင်း USDP ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဆန်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မမျှတတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိခဲ့တာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေကို တိုင်ကြားဖို့ အထောက်အထား အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
" ကန့်ကွက်လွှာတိုင်ကြားလွှာပေါင်း ၂၂၈ခု၊ ကျနော်တို့ကိုယ်စားလာပေးတာ နေရာတော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ် နောက်တခုကတော့ လုတဦးတည်း ၂ခါမဲပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ ၅ရက်နေ့ထိ ကြိုတင်မဲပေးတာရှည် ကြာခြင်း ကြိုတင်မဲပေးပြီးကြောင်းလက်သန်းမှင်မစွတ်ခြင်း၊ ဒီပြဿနာတွေကြောင့်ဒါ လူတဦးထဲ ၂ခါမဲ ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ရပါတယ်။"
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတိုက်အခံ USDP ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားထားတဲ့ အမှုပေါင်း ၅၅၀ ကျော်ရှိနေပြီး၊ ရဲစခန်းကို တိုက်ရိုက်တိုင်ထားတဲ့ အမှုက ၈၀ ကျော် ရှိတယ်လို့လည်း နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝန်းက ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား မဲဆန္ဒနယ်မြေ တချို့မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲကာလ မမှန်မကန်လုပ်ရပ်တွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး တိုင်တန်းတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ SNLD ပါတီ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ၁ စိုင်းကျော်ညွန့်ကတော့ မဲမသမာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက် တိုင်ကြားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"မိုင်းတုံ မိုင်းဆတ်မှာ မိုင်းတုံမှာ လူ (၁၇၀၀၀) တသောင်းခုနှစ်ထောင် လောက်ရှိတယ်။ အဲ (၁၇၀၀၀) တသောင်းခုနှစ်ထောင်က လောက်က Document မရှိဘူး။ မှတ်ပုံတင်မရှိဘူး။ ဘာကဒ်မှမရှိဘူး။ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ အထောက်အထားမရှိဘူး။ အဲဒါ မဲစာရင်းထဲလာပေါက်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပထဲကပြောတယ်.အဲဒါမအောင်မြင်ဘူး။ မိုင်းဆတ်မှာဆို (၂၂၀၀၀) နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော်တောင် ရှိတယ်။ အဲဒါတွေစစ်မရဘူး။ ကျနော်တို့ ခါတိုင်းမဲပေးနေတဲ့ ရွာတွေတောင် ကြိုတင်မဲက ၂မဲ ၃မဲဘဲ ရတာရှိတယ်။ ဒါတော်တော်စဉ်းစားစရာကိစ္စဖြစ်တယ်"။
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့ တိုင်ကြားမှုတွေဟာ အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေထက် ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်း New Myanmar Foundation ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် အဖွဲ့က ဒေါ်မြနန္ဒာသင်းကဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
" ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလကနေ တလျှောက်လုံးရွေးကောက်ပွဲ အစကနေခုထိဆို အမှုပေါင်း ၄၅၅ခုဖြစ်တယ်။ ဒီထဲမှာ ဘယ်ကြောင်းရာများလဲဆိုတော့ ဥပမာ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှု က ၇% ရှိတယ်။ မဲမသမာတာမဲနဲ့ပတ်သတ်လို့ လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတာကကျတော့ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ရှိတယ်။နောက် ကမ်ပိန်းမှာ ရန်စတာ ဘာညာက ၈% ရှိတယ်။ ဒါက observer တွေ ပို့တာပါ။ အရင်နှစ်ကထက်ပိုများလာတယ်ပြောကြတယ် "။
လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၉)၊ ပုဒ်မ ၃၉၉ မှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ အငြင်းပွားမှုတွေကို စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောာက်ပွဲခုံအဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့ ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၀၂ မှာတော့ ရွေးကောာက်ပွဲခုံအဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အမိန့်တွေဟာ အပြီးပြတ်အတည်ဖြစ်တယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံ ပွီးခဲ့တဲ့ရှေးကောကျပှဲကို ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးကငျြးပခဲ့ပမေဲ့ မသမာမူတှေ၊ မမြှတမှုတှေ ရှိခဲ့တယျဆိုပွီး ဆကျလကျထှကျပျေါနတေဲ့အကွောငျး ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မမခေ က သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ဒီလနိုဝငျဘာ ၈ ရကျနကေ့ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ရှေးကောကျပှဲ လုပျငနျးစဉျမှာ မသမာမှုတှေ၊ မမြှတမှုတှေ ရှိနတေယျဆိုပွီး အနိုငျရ NLD အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ အဓိကအတိုကျအခံ USDP ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ တိုငျးရငျးသား နိုငျငံရေးပါတီကွီးတခုဖွဈတဲ့ SNLD ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျတို့ အပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီတခြို့က အငွငျးပှားတာ၊ တိုငျတနျးတာတှေ ရှိနတောပါ။
NLD ပါတီပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့ကတော့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ အငွငျးပှားစရာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ အခကျြအလကျတှေ စုဆောငျးနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
"မရှိဘူးဆို ၄၀၊ ၅၀ လောကျရှိတာပေါ့။ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာပေါ့. တရားမဲ့ပွုကငျြ့မှု တော့ မဟုတျဘူး။ တရားမဲ့ပွုကငျြ့မှုကတော့ ဒီထကျနညျးမှာပါ။ ကနြျောတို့တှသေ့လောကျကတော့ ကနြျောတို့တိုငျတာက ၂၀၁၅ထကျ တော့ပိုမြားလာနိုငျပါတယျခငျဗြ "
မန်တလေးတိုငျး USDP ပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးဖွဈတဲ့ ဦးကြျောဆနျးကတော့ ရှေးကောကျပှဲလုပျငနျးစဉျမှာ မမြှတတဲ့ လုပျရပျတှေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ရှိခဲ့တာကွောငျ့ တာဝနျရှိသူတှကေို တိုငျကွားဖို့ အထောကျအထား အခကျြအလကျတှေ စုဆောငျးနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
" ကနျ့ကှကျလှာတိုငျကွားလှာပေါငျး ၂၂၈ခု၊ ကနြျောတို့ကိုယျစားလာပေးတာ နရောတျောတျောမြားမြား တှရေ့ပါတယျ။ တိုငျကွားခဲ့ပါတယျ။ ကနျ့ကှကျခဲ့ပါတယျ နောကျတခုကတော့ လုတဦးတညျး ၂ခါမဲပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကလညျး အောကျတိုဘာ ၂၉ ရကျကနနေိုဝငျဘာ ၅ရကျနထေိ့ ကွိုတငျမဲပေးတာရှညျ ကွာခွငျး ကွိုတငျမဲပေးပွီးကွောငျးလကျသနျးမှငျမစှတျခွငျး၊ ဒီပွဿနာတှကွေောငျ့ဒါ လူတဦးထဲ ၂ခါမဲ ပေးတာတှရေ့ပါတယျ။ ရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ရပါတယျ။"
ရှေးကောကျပှဲ လုပျငနျးစဉျနဲ့ ပတျသကျလို့ အတိုကျအခံ USDP ပါတီက ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျကို တိုငျကွားထားတဲ့ အမှုပေါငျး ၅၅၀ ကြျောရှိနပွေီး၊ ရဲစခနျးကို တိုကျရိုကျတိုငျထားတဲ့ အမှုက ၈၀ ကြျော ရှိတယျလို့လညျး နိုငျငံရေး အသိုငျးအဝနျးက ပွောပါတယျ။
တိုငျးရငျးသား မဲဆန်ဒနယျမွေ တခြို့မှာလညျး ရှေးကောကျပှဲကာလ မမှနျမကနျလုပျရပျတှေ ရှိခဲ့တယျဆိုပွီး တိုငျတနျးတာတှေ ရှိနပေါတယျ။ SNLD ပါတီ တှဲဘကျအတှငျးရေးမှူး ၁ စိုငျးကြျောညှနျ့ကတော့ မဲမသမာတဲ့ လုပျရပျတှေ ကွုံခဲ့ရတဲ့အတှကျ တိုငျကွားဖို့ ပွငျဆငျနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
"မိုငျးတုံ မိုငျးဆတျမှာ မိုငျးတုံမှာ လူ (၁၇၀၀၀) တသောငျးခုနှဈထောငျ လောကျရှိတယျ။ အဲ (၁၇၀၀၀) တသောငျးခုနှဈထောငျက လောကျက Document မရှိဘူး။ မှတျပုံတငျမရှိဘူး။ ဘာကဒျမှမရှိဘူး။ နိုငျငံသားဖွဈတဲ့ အထောကျအထားမရှိဘူး။ အဲဒါ မဲစာရငျးထဲလာပေါကျနတေယျ။ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပထဲကပွောတယျ.အဲဒါမအောငျမွငျဘူး။ မိုငျးဆတျမှာဆို (၂၂၀၀၀) နှဈသောငျးနှဈထောငျကြျောတောငျ ရှိတယျ။ အဲဒါတှစေဈမရဘူး။ ကနြျောတို့ ခါတိုငျးမဲပေးနတေဲ့ ရှာတှတေောငျ ကွိုတငျမဲက ၂မဲ ၃မဲဘဲ ရတာရှိတယျ။ ဒါတျောတျောစဉျးစားစရာကိစ်စဖွဈတယျ"။
ရှေးကောကျပှဲ လုပျငနျးစဉျအပျေါ အငွငျးပှားမှုတှနေဲ့ တိုငျကွားမှုတှဟော အရငျရှေးကောကျပှဲတှထေကျ ပိုမြားနိုငျတယျလို့လညျး New Myanmar Foundation ရှေးကောကျပှဲစောငျ့ကွညျ့ အဖှဲ့က ဒျေါမွနန်ဒာသငျးကဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
" ရှေးကောကျပှဲအကွိုကာလကနေ တလြှောကျလုံးရှေးကောကျပှဲ အစကနခေုထိဆို အမှုပေါငျး ၄၅၅ခုဖွဈတယျ။ ဒီထဲမှာ ဘယျကွောငျးရာမြားလဲဆိုတော့ ဥပမာ တရားမဲ့ ပွုကငျြ့မှု က ၇% ရှိတယျ။ မဲမသမာတာမဲနဲ့ပတျသတျလို့ လှမျးမိုးမှုတှရှေိတာကကတြော့ ရာခိုငျနှုနျး ၂၀ ရှိတယျ။နောကျ ကမျပိနျးမှာ ရနျစတာ ဘာညာက ၈% ရှိတယျ။ ဒါက observer တှေ ပို့တာပါ။ အရငျနှဈကထကျပိုမြားလာတယျပွောကွတယျ "။
လကျရှိ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ အခနျး (၉)၊ ပုဒျမ ၃၉၉ မှာ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဟာ အငွငျးပှားမှုတှကေို စဈဆေးနိုငျရေးအတှကျ ရှေးကောာကျပှဲခုံအဖှဲ့တှကေို ဖှဲ့စညျးနိုငျတယျလို့ ဖျေါပွထား ပါတယျ။ ပုဒျမ ၄၀၂ မှာတော့ ရှေးကောာကျပှဲခုံအဖှဲ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ အမိနျ့တှဟော အပွီးပွတျအတညျဖွဈတယျလို့ ဖျေါပွထားပါတယျ။